Il Divino the Divine - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-01 > ဘုရား Divino
အီတလီ၊ Tuscany၊ Carrara ရှိကျောက်တုံးကျောက်တုံးတစ်တုံးသည်အမြင့်မီတာ ၃၀ ခန့်ရှိပြီးအလေးချိန်တန် ၃၀ ခန့်ရှိသည်။ blockရာမပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို Florence သို့လှေဖြင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှပန်းပုဆရာ Agostino di Duccio ကသမ္မာကျမ်းစာသူရဲကောင်းဒါဝိဒ်၏ရုပ်ထုကိုပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ ပန်းပုဆရာသည်ခြေဖဝါးနှင့်ခြေထောက်များကိုအကြမ်းဖျင်းထွင်းဖောက်ထားသော်လည်းစကျင်ကျောက်၌အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်စီမံကိန်းကိုခက်ခဲစွာစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ အခြားပန်းပုဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သောအန်တိုနီယိုရော့စီလီနိုသည်စိန်ခေါ်မှုသို့မရောက်မီ ၁၂ လခန့်ကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ သို့သော်သူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲလွန်း။ တန်ဖိုးမရှိသောအရာတစ်ခုအဖြစ်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုများအရစကျင်ကျောက်သည်သာမန်အရည်အသွေးရှိကြောင်းနှင့်rosရာမအပေါက်များနှင့်သွေးပြန်ကြောများသည်containedရာမရုပ်ထု၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံပျက်နေသောစကျင်ကျောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုစွန့်ပစ်ပြီးမီရှယ်ဂယ်လယ်လ်သည်လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်တာ ၀ န်မယူမီနောက်ထပ် ၂၅ နှစ်ကြာသောဒြပ်စင်များနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ Michelangelo သည် Renaissance ပန်းပုလက်ရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောအရာများကိုဖန်တီးရန်အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
Michelangelo ၏ပန်းပုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အမြင်မှာသူသည်သူ၏ခေါင်းပေါ်မှမွေးဖွားလာသူကိုစကျင်ကျောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤရုပ်ထုသည်မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထက် ပို၍ ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ David ပန်းပုရုပ်တုသည်အပြင်ပန်းအသွင်အပြင်ဖြင့်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဒါဝိဒ်၌သူ၏စရိုက်လက္ခဏာအားနည်းချက်များရှိသကဲ့သို့အတွင်းပိုင်းအားနည်းချက်များနှင့်မစုံလင်မှုများရှိသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌ကောင်းမွန်သောဘက်၊ လက္ခဏာမကောင်းသောလက္ခဏာများ၊ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များနှင့်မစုံလင်မှုများရှိသည်။
သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် Michelangelo သည် သူ၏အရည်အချင်းများနှင့် အစွမ်းအစများကြောင့် "Il Divino", "The Divine" ဟု မကြာခဏခေါ်ဆိုခံရသည်။ အီစတာတွင် အခြားနတ်တစ်ပါးထံမှ သတင်းစကားတစ်ခုရှိပြီး၊ ယခုနှင့် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိသည်- "ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိစဉ်အခါက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်အသေခံခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသတော်မူသည်" (ရောမ၊ 5,8).
သင်ဟာအပြစ်သားတစ်ယောက်လိုဘုရားဆီကိုလာပြီးသင်ဖြစ်သင့်သလိုမဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုမဆုံးရှုံးစေရ၊ သင်၏မစုံလင်မှုများကြောင့်သင့်ကိုဘေးဖယ်ထားလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်တန်ဖိုးမရှိသောအရာများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုသိပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးအပေါ်ခြွင်းချက်မရှိသောမေတ္တာကိုပြသခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ကပြုခဲ့သည့်အပြစ်များကိုနောင်တမရနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများအပြင်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုဘုရားသခင်မြင်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ အပြစ်မရှိသောသူသည် ငါတို့အတွက် အပြစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရှိသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြစ်စေခြင်းငှါ၊2. ကောရိန္သု 5,21).
ယခုလာမည့်အီစတာအားလပ်ရက်တွင်သင်အလုပ်များနေသည့်ဘဝမှအနားယူပြီးအီစတာ၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုအချိန်ယူစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌၎င်း၊ သူနှင့်အတူအစဉ်အမြဲနေနိုင်ရန်သင်၏အပြစ်များကိုယေရှုအားဖြင့်သင်၏အသက်တာထဲမှသင်၏အပြစ်များကိုခုတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။